Atụmatụ WordPress 3.0 | Ntanetị weebụ | Roundpeg
Satọde, 12 Juun 2010 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Bọọlụ Lorraine
Adịghị m techy site na ọzụzụ ma ọ bụ okike, yabụ ana m achọ ngwa ọrụ nke ga-enyere m aka igwu egwu na mpaghara teknụzụ. Afọ abụọ na ọkara gara aga, achọpụtara m WordPress, ma m bụ onye na-agbanwe egwuregwu.
Iji WordPress dị ka usoro njikwa ọdịnaya, anyị nwere ike ịmepụta, nyocha ọkachamara, dị mfe iji webụsaịtị maka ndị ahịa anyị pere mpe. Ndepụta na-eto eto nke plugins emeela ka anyị nwee ike ịmepụta ọtụtụ saịtị siri ike, yana atụmatụ ndị yiri nke saịtị ahaziri iche dị na isi ọnụahịa dị elu. - Ya mere itinye ya nwayọ, abụ m onye WordPress Fan.
Na mmelite ọ bụla, enwere ọtụtụ atụmatụ na-eme ka ọrụ m dị mfe ma mee ka ndụ ndị ahịa anyị dị mfe. Ma ugbu a, WordPress 3.0 ndokwa maka ịhapụ na Mọnde. Kedu ka ụdị ọhụrụ a ga-esi ka mma? Akụkọ mmalite sitere na ndị nyocha Beta hints na ụfọdụ atụmatụ ọhụụ dị egwu:
Omenala Post Types: Na ụdị ochie ị nwere ike ịmepụta posts na ibe, ugbu a ị nwere ike ịmepụta usoro ndị ọzọ maka ụdị ozi, nyocha, ajụjụ FAQ, ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ọrụ, ndepụta nke omume nwere ike ịbụ ogologo oge ụdị ụlọ ọrụ ndị nwere ike iji ya.
Onye edemede posts: Na otutu blọọgụ dị ka nke a, onye ọ bụla na-ede akwụkwọ nwere ike ịnwe "ụdị" nke ha. Ọ bụ ezie na ndị nwe saịtị ahụ ka kwesịrị ịchịkwa ọdịdị niile ma chee ka ha jigide iguzosi ike n'ezi ihe, nke a kwesịrị ikwe ka ntakịrị mmadụ nwekwuo. M n'ezie obi ụtọ banyere nke a karịsịa mma maka okirikiri blog dị ka onye ọ bụla nke otu m malitere ide ọtụtụ ọdịnaya.
Njikwa Nchịkọta: Na mbipute ochie, ịhazi peeji na peeji ibe ga-achịkwa n'ime ọkwa ọ bụla. Tinye peeji dị mfe, mana ị nweta ya n'ọnọdụ ziri ezi na igodo ahụ nwere ike ịbụ ihe mgbu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ peeji. Inwe otu isi
Sidebar n'okpuru Wijetị: Anyị na-ejikarị isiokwu pịa Studio eme ihe n'ihi atụmatụ a nke na-enye anyị ohere ịmepụta ihe ndabere ọdịnaya nke jupụtara na ibe ọ bụla. Obi dị m ụtọ ịhụ nke a gụnyere n'ime 3.0 dịka ọkọlọtọ.
Na-ejikọ saịtị naanị na Multisite: Ọ bụ ezie na ndị ahịa m achọghị ịma, nke a ga-abụrụ anyị nnukwu mmụba, ka anyị na-agbakwunye saịtị na ọtụtụ saịtị. Tụgharị na usoro MU ga-enye anyị ohere imelite plugins na ọdịnaya otu ugboro, ọ bụghị ugboro ugboro!
E nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ na nkwalite a! Enweghị m ike ichere ịnwale ha niile. Ga-achọ ịma ihe kachasị amasị gị ka ị na-amalite ịrụ ọrụ na ụdị kachasị ọhụrụ.
Tags: edemede postsnjikwa menumultisiteWordPressokwu 3okwu 3.0
Jun 12, 2010 na 10:03 AM
* DONT_KNOW * Ọ ga-atọ ụtọ ịhụ ihe 'ekpomeekpo' nke MU ha na-etinye ọnụ. Otutu ngalaba abughi ihe di nkpa nke MU ma sie ike mmejuputa (anyi mere ntinye 14) na ufodu ihe ndi ozo adighi nma (dika itinye ihe ntinye di na netwọk nile adighi ka odi oru). M ga-akpachara anya megide iji MU iji kwado ọtụtụ ndị ahịa n'otu aka ahụ, ọ ga-achọ ka ị kwaga ndị ahịa niile ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkwaga na gburugburu ebe nchekwa ngwa ngwa, ma ọ bụ na ha chọrọ ịmechaa nke ha.